Izisebenzi Zithi I-NSSA Kufanele Yengezelele Imali Ephiwa Izisebenzi
Izisebenzi zithi imali le ephiwa izisebenzi kufanele ikhuphulwe isuka kumadola angamatshumi ayisithupha-$60 isiya kumadola alingana lesilinganiso semali yokuthi imuli eyodwa iziphilise ngenyanga iPoverty Datum Line.
WASHINGTON — Izisebenzi zithi kufanele inhlanganiso kahulumende eye National Social Security Authority-NSSA yengezelele imali ephiwa izisebenzi esezitshiye umsebenzi njalo inanze abasebenza ezindlini labazisebenzayo ukwenzela ukuthi ifeze injongo yokubunjwa kwayo.
Lokhu kuvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eye Zimbabwe Congress of Trade Unions-ZCTU uMnu. George Nkiwane kanye lesiphathamandla senhlanganiso ye Public Service Association uNkosikazi Cecelia Alexander edale lephalamende ngoMvulo.
Izisebenzi zithi imali le ephiwa izisebenzi kufanele ikhuphulwe isuka kumadola angamatshumi ayisithupha 60 dollars isiya kumadola alingana lesilinganiso semali yokuthi imuli eyodwa iziphilise ngenyanga i poverty datum line.
Okunengi ngaloludaba, asikuzweni kungxoxo esiyiqhube loMnu. Nkiwane, yena ogcizelele kuSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kunengi okufanele kuguqulqwe ekusebenzeni kweNSSA.